Benjamins စျေး - အွန်လိုင်း BEN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Benjamins (BEN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Benjamins (BEN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Benjamins ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $111 369.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Benjamins တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Benjamins များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BenjaminsBEN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.312BenjaminsBEN သို့ ယူရိုEUR€0.263BenjaminsBEN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.238BenjaminsBEN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.283BenjaminsBEN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.77BenjaminsBEN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.96BenjaminsBEN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč6.88BenjaminsBEN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.16BenjaminsBEN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.413BenjaminsBEN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.435BenjaminsBEN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$6.86BenjaminsBEN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$2.42BenjaminsBEN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.67BenjaminsBEN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹23.35BenjaminsBEN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.52.65BenjaminsBEN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.427BenjaminsBEN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.476BenjaminsBEN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿9.7BenjaminsBEN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥2.17BenjaminsBEN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥33.21BenjaminsBEN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩369.99BenjaminsBEN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦120.43BenjaminsBEN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽22.76BenjaminsBEN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴8.52
BenjaminsBEN သို့ BitcoinBTC0.00003 BenjaminsBEN သို့ EthereumETH0.000812 BenjaminsBEN သို့ LitecoinLTC0.00573 BenjaminsBEN သို့ DigitalCashDASH0.00344 BenjaminsBEN သို့ MoneroXMR0.0035 BenjaminsBEN သို့ NxtNXT24.32 BenjaminsBEN သို့ Ethereum ClassicETC0.046 BenjaminsBEN သို့ DogecoinDOGE90 BenjaminsBEN သို့ ZCashZEC0.00379 BenjaminsBEN သို့ BitsharesBTS9.61 BenjaminsBEN သို့ DigiByteDGB9.98 BenjaminsBEN သို့ RippleXRP1.11 BenjaminsBEN သို့ BitcoinDarkBTCD0.0107 BenjaminsBEN သို့ PeerCoinPPC1.03 BenjaminsBEN သို့ CraigsCoinCRAIG142.1 BenjaminsBEN သို့ BitstakeXBS13.3 BenjaminsBEN သို့ PayCoinXPY5.44 BenjaminsBEN သို့ ProsperCoinPRC39.13 BenjaminsBEN သို့ YbCoinYBC0.000168 BenjaminsBEN သို့ DarkKushDANK100.08 BenjaminsBEN သို့ GiveCoinGIVE675.47 BenjaminsBEN သို့ KoboCoinKOBO71.05 BenjaminsBEN သို့ DarkTokenDT0.287 BenjaminsBEN သို့ CETUS CoinCETI900.76
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 14:05:02 +0000.